IVA 5T ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံးနည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- IVA 5T
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: IVA5T
IVA5T 5ton exported ice making machine (100% New) is supplied with high quality and at the most competitive price in the South East Asian market.
IVA 5T ၅ တန် တင်ပို့ထားသော ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)ကို အဆင့်မြင့်သော ကွာလတီနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှဈေးကွက်မှာ ချိုသာစွာ ရောင်းချပေးနေပါတယ်။
Video of IVA5T 5Ton Stainless Steel Tube ice making machine
Nowadays, the ice-making industry is becomingapotential industry with high benefits and short depreciation period. IVA5T 5Ton Stainless Steel Tube ice making machine will beaperfect choice for the customers who want to catch up with this increasing trend.
ယနေ့အခါမှာ ရေခဲစက်ပြုလုပ်သော စက်ရုံတွေက အကျိုးအမြတ်များသလို တန်ဖိုးလျော့ကျတဲ့အချိန်လည်း နည်းပါတယ်။ ဒီတိုးတက်မှုကို မီနိုင်ဖို့ IVA5T စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်က ဝယ်ယူသူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
To know more details about price of tube ice making machines, ranging from mini machines to industrial machines, go to:
The machine is produced according to American technology. With smart and compact design, the machine offers an easy installation, safe and stable operation, low maintenance cost and energy saving. That is why the machine is widely chosen by the customers thanks to its convenience, savings and safety.
ဒီစက်ကို အမေရိကန်ရဲ့ နည်းပညာအတိုင်း ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ စမတ်ကျပြီး သိပ်သည်းသော ဒီဇိုင်းကြောင့် အလွယ်အတူ တပ်ဆင်နိုင်တယ်။ စိတ်ချရပြီး တည်ငြိမ်သော လုပ်ဆောင်မှုကို ပြုလုပ်တယ်။ ထိန်းသိမ်းဖို့ အကုန်အကျနည်းတယ်။ အင်နာဂျီချွေတာနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဝယ်ယူသူတွေက ရွေးးချယ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Exported IVA5T 5ton Industrial Tube Ice Making Machine (100% New)
တင်ပို့ထားသော IVA5T ၅တန် စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)
Asaleading enterprise with nearly 20 years of experience in importing, manufacturing and distributing filling machines, bottle blowing machines, water filtration lines, manufacturing stainless steel ice machines, etc., we’ve always tried our best to apply the most advanced technology (American, European, Japanese technology) into the production. Thanks to our unceasing efforts, we have achievedavariety of honorable prizes and certificates:
Gold Medal Vietnam High Quality Goods in 2009Gold Medal Vietnam High Quality Goods in 2009
IVA5T 5TON INDUSTRIAL TUBE ICE MAKING MACHINE (100% New )
IVA 5T ၅တန် စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)
The machine is used to produce up to5tons of tube iceaday and is commonly used in the food processing industry, restaurants, fast food shops, schools, etc.
ဒီစက်ကို တစ်ရက်လျှင် ရေခဲတုံး ၅ တန်ထုတ်ရန် အသုံးပြုပါတယ်။ အစားအသောက်စက်ရုံ၊ စားသောက်ဆိုင်၊ အသင့်စား အစားအစာဆိုင်၊ ကျောင်း စတာတွေမှာ အသုံးများကြပါတယ်။
Imported compressor (100% New)
တင်ပို့ထားသော ဖိသိပ်စက်များ (၁၀၀% အသစ်)
Only in Viet An, we use 100% new compressors for the ice-making machine. All of our compressors are produced in the foreign countries under strict quality control. It is manufactured in an absolutely automatic CNC system with automatic cutting, pressing and molding processes. After that, it is transferred to the high pressure testing machine - the best high pressure testing machine imported from German.
Only in Viet An, we apply 100% new liquid and gas separation system for the ice making
Viet An ကသာလျှင် ရေခဲထုတ်ရာတွင် အရည်နဲ့ အငွေ့ ခွဲထုတ်ပေးသော စနစ် ၁၀၀% အသစ်ကို အသုံးပြုသည်
The air compressor is used for the ice-making machine. The liquid and gas separation system is designed to separate liquid from the inlet air to ensure no liquid remains in the air before it is routed into the airline in order for the compressor to operate smoothly, thereby improving the machine's shelf life.
လေဖိသိပ်စက်ကို ရေခဲထုတ်စက်မှာ အသုံးပြုပါတယ်။ သူက လေအေးကို စုပ်ယူပြီး လေပူကို စွန့်ထုတ်ပါတယ်။ အရည်နှင့် အငွေ့ခွဲထုတ်ပေးသောစက်ကို လေလက်ကြားမှ အရည်တွေကို ခွဲထုတ်နိုင်အောင် ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ ဒါမှ လေလမ်းကြောင်းမှာ မလည်ပတ်ခင် လေထဲတွင် အရည်မကျန်မှာ သေချာစေပါတယ်။ သို့မှသာ စက်က ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်နိုင်ပြီး သက်တမ်းကြာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖိသိပ်စက်ကို ပျက်စီးစေသော အကြောင်းအရင်းများစွာ
Burned electric coils due to excessive liquid remained.
အရည်တွေ ကျန်နေခြင်းက လျှပ်စစ် ကွိုင်တွေကို လောင်စေတယ်။
Damaged valves due to due to excessive liquid remained.
အရည်တွေ ကျန်နေခြင်းက အဆို့တွေကို ပျက်စီးစေတယ်။
အရည်တွေ ကျန်နေခြင်းက ဆက်သွယ်ပေးသော အတံများကို ကျိုးစေတယ်။
Foaming oil due to excessive liquid remained.
အရည်တွေ ကျန်နေခြင်းက ဆီတွေကို အမြုပ်ထစေတယ်။
The compressor cannot evenly distribute the air within the inner system due to excessive liquid remaining. Excessive liquid affects other parts.
အရည်တွေ ကျန်နေခြင်းက ဖိသိပ်စက်က အတွင်းစနစ်အတွင်း လေကို မဖြန့်နိုင်အောင် ပြုလုပ်တယ်။ အရည်တွေ ကျန်နေခြင်းက အခြားအပိုင်းတွေကို ထိခိုက်စေတယ်။
The liquid and gas separation system is therefore designed to separate liquid from the inlet air to ensure no liquid remained in the air before it is routed into the air line in order for the compressor to operate smoothly, thereby improving the machine's shelf life.
အရည်နှင့် အငွေ့ခွဲထုတ်ပေးသောစက်ကို လေလက်ကြားမှ အရည်တွေကို ခွဲထုတ်နိုင်အောင် ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ ဒါမှ လေလမ်းကြောင်းမှာ မလည်ပတ်ခင် လေထဲတွင် အရည်မကျန်မှာ သေချာစေပါတယ်။ သို့မှသာ စက်က ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်နိုင်ပြီး သက်တမ်းကြာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခိုးကို အရည်ဖြစ်စေသည့် ကိရိယာနှင့် အေးစေသောတာဝါ (၁၀၀% အသစ်)
The electrical system used for Viet An’s ice making machines is absolutely automatic. The machine will immediately starts with only one on/off button. The system will automatically stop when there is an electrical problem incurred. In addition, the customers can choose to purchaseaseparate electrical system with TLC programming. The system is optional.
ရေခဲထုတ်စက်မှာ အသုံးပြုတဲ့ လျှပ်စစ်စနစ်က လုံးဝကို အော်တိုလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ စက်က ခလုတ်အဖွင့်အပိတ် တစ်ခုတည်းနဲံ ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ စနစ်က လျှပ်စစ်ပြသနာ ပေါ်ပေါက်တဲ့အခါမှာ ချက်ချင်း ရပ်သွားမှာပါ။ ထို့အပြင် ဝယ်ယူသူများမှ TLC ပရိုဂရမ်ပါတဲ့ လျှပ်စစ်စနစ်ကိုလည်း သီးခြားပေးချေနိုင်ပါတယ်။ မဝယ်မနေရ မဟုတ်ပါ။
304 စတိန်းလက်စ်စတီး ရေစုပ်စက်
Images of exclusive components
Above are some of the latest technologies typically used for Viet An’s ice making machines. They make the production process much quicker, convenient and cost-effective. These exclusive technologies are only available in Viet An. Thanks to the great benefits of these products, they have been widely chosen by the customers despite the high prices. With these new machines, you can remarkably save energy and reduce production time. With these new machines, you can remarkably save energy and reduce production time. Let's imagineanew and an old ice making machine with the same capacity, then: This does not include the expenses to resolve the errors during the operation with the old machine. During these2years, the old machine can generate stable performance while the old one cannot assure this. Even if there are no errors during the first2years, until the 3rd year, the old machine will surely operate much better than the old one. With above information, it’s your right to chooseanew or old machine.
အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတာတွေက Viet An ရဲ့ ရေခဲထုတ်စက်တွေအတွက် အသုံးပြုတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းတို့က ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုလျင်မြန်စေပြီး အဆင်ပြေချောမွေ့စေကာ အကုန်အကျလည်း နည်းစေပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့ ကြီးမားတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကြောင့် ဝယ်ယူသူအများစုရဲ့ ရွေးချယ်ခြင်းကို ခံရပါတယ်။ ဒီစက်အသစ်တွေကြောင့် အင်နာဂျီကို အံ့သြဖွယ်ကောင်းအောင် ချွေတာနိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှု အချိန်ကိုလည်း လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း တူညီတဲ့ ရေခဲထုတ်စက် အသစ်နဲ့ အဟောင်းကို စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။ ၂ နှစ်ပြီးသွားတဲ့ အခါမှာ စက်အဟောင်းရဲ့ ဈေးနှုန်း+ မီတာခ ၂ နှစ်က ၁၀၀% အသစ်စက်ရဲ့ ဈေးနှုန်း+ မီတာခ ၂ နှစ် တူညီနိုင်သလို မြင့်လည်း မြင့်နိုင်ပါတယ်။ စက်အဟောင်းမှာ ဆိုရင် လည်ပတ်နေမှုအတွင်း ပြသနာပေါ်ပေါက်လျှင် ပြန်ပြင်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ် မပါဝင်ပါဘူး။ ဒီ၂ နှစ်အတွင်းမှာ စက်အသစ်က တည်ငြိမ်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ ၂ နှစ်အတွင်းမှာ အပျက်အစီးမရှိနိုင်ပေမယ့် ၃ နှစ်မြောက်အထိ စက်အသစ်က ပိုမို ကောင်းကောင်း လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။ အပေါ်က အချက်အလက်အရ စက်အသစ်နဲ့ အဟောင်း သင်ရွေးချယ်လို့ ရပါပြီ။
တကယ်လို့ သင်က အရည်နဲ့ အငွေ့ ခွဲထုတ်ပေးသောစက်မပါသော၊ အခိုးကို အရည်ဖြစ်စေသည့် စက်အဟောင်း၊ ရေစုပ်စက်အဟောင်း၊ အခြားအစိတ်အပိုင်းတို့ ပါဝင်သော ဖိသပ်စက် အဟောင်းကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် https://locnuocvietan.vn/san-pham-viet-an/may-lam-da-vien/ တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာလိုက်ပါ။
The steam at low pressure is pumped into the compressor and compressed to reach high pressure. Next, the solvent vapor is transferred to the oil separator for oil separation. It is then transferred toacondenser for heat exchanger so that the steam temperature and pressure are reduced and condensed intoaliquid form. The liquid solvent then passes through the heater and is reduced in temperature based on the vaporizer's heat after passing through the evaporator. The liquid solvent then goes through the high pressure tank. The solvent is fed intoahigh pressure vessel and then pressurized to reach the vapor pressure. In the evaporator, the solvent absorbs the heat of the ice water and evaporates.
အပူနည်းသော ရေနွေးငွေ့ကို ဖိသိပ်စက်ဆီသို့ စုပ်တင်ပေးပြီး ဖိအားများအောင် ဖိသိပ်ပါမယ်။ ထို့နောက် ဖျော်ရည်အငွေ့ကို ဆီကို ခွဲထုတ်ပေးသောစက်ဆီသို့ ဆီခွဲထုတ်ရန် ပို့ဆောင်ပါမယ်။ ထို့နောက် အပူပြောင်းလဲရန် အခိုးကို အရည်ဖြစ်စေသော စက်ဆီသို့ ရွှေ့ပါမယ်။ သို့မှသာ ရေနွေးငွေ့ အပူချိန်နဲ့ ဖိအားကို လျှော့ချနိုင်ပြီး အခိုးကို အရည်ပုံ ပြောင်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖျော်ရည်ကို အပူစက်ကို ဖြတ်ကာ အပူချိန်ကို လျှော့ချရန် အငွေ့ပြောင်းပေးတဲ့စက်ကို ဖြတ်ပါမယ်။ ထို့နောက် အရည်ကို ဖိအားမြင့် တိုင်ကီကို ဖြတ်စေပါမယ်။ အရည်ကို ဖိအားမြင့် ဘူးထဲထည့်ပြီး အငွေ့ဖိအားမြင့်ကို ရောက်ရန် မြှင့်တင်ပါတယ်။ အငွေ့ပြောင်းပေးတဲ့ စက်ထဲမှာ အရည်က ရေခဲရေရဲ့ အပူကို စုပ်ယူပြီး အငွေ့ပျံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Our products are high quality, durable, and affordable. In addition, we also haveateam of qualified and dedicated technicians. In addition to this product, we also offer many other products for the bottled water industry.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေက အရည်အသွေးမြင့်ပြီး ကြာရှည်ခံကာ တတ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ကျွန်တော်တို့မှာ အရည်အချင်းပြည့်မီတဲ့ နည်းပညာရှင်အသင်းလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းအပြင် ရေသန့်ဘူးစက်ရုံတွေအတွက် အခြားပစ္စည်းတွေလည်း ရောင်းချပေးပါတယ်။
Call us now at +84 839 31 31 31 forafree consultation.
+၈၄ ၈၃၉ ၃၁ ၃၁ ၃၁ ကို ဆက်သွယ်ပြီး အခမဲ့ ဆွေးနွေးလိုက်ပါ။
Hỏi đáp & đánh giá IVA 5T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)